Qorshooyinka Casharka: Xirmooyinka - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Qorshooyinka Casharka Bilaashka ah Qorshooyinka Casharka: Xidhmooyinka
Si aad u siiso ardaydaada sida ugu fiican oo dhan barashada wareega ee ku saabsan filimada internetka iyo galmada, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho xirmooyinka casharrada badan.
Si loo baaro waxa ku jira cashar kasta, dhagsii sawirka xirmada. Haddii aad rabto inaad haysato xirmo casharro ah oo ku saabsan sawir-gacmeedka qaawan ee internetka oo keliya ama ku saabsan galmada oo keliya, eeg xirmada ku habboon ee hoose.
Casharrada waxaa lagu heli karaa daabacaadda Boqortooyada Midowday (UK), Daabacaadda Mareykanka iyo Daabacaadda Caalamiga (Ingiriisiga)
Pornography Internet iyo Sexting Bundle, England
Pornography Internet iyo Cinwaanka Jinsiga, Wales
Pornography Internet iyo Sexting Bundle, Scotland
Pornography Internet iyo Cinwaanka Jinsiga, Daabacaadda Caalamiga ah
Pornography Internet iyo Cinwaanka Jinsiga, Daabacaadda Mareykanka
Xirmooyinka Pornography Internetka
Xirmooyinka filimada internetka waxaa ku jira seddex cashar oo ka hadlaya dhinacyada kala duwan ee filimada. Waxaan ku darnay cashar gunno ah oo bilaash ah sidoo kale.
Miyuu sawir-gacmeedku waxyeello leeyahay? Qaybta koowaad waa madadaalo, cashar is-dhexgal ah oo ay ardaydu u dhaqmaan sidii xeerbeegti si ay u qiimeeyaan 8 qaybood oo caddayn ah oo ka dhan ah iyo diidmo, laga helay ilo fara badan oo ay ku jiraan kuwa caafimaad, ka hor inta aan la gaadhin gabagabada sababaysan. Faa'iido u leh tusidda kormeerayaasha dugsiga iyo waalidiinta.
Qaybta labaad waxay si gaar ah u eegaysaa saameynta caafimaadka maskaxda ee filimada iyo sida ay u saameyso helitaanka iyo kalsoonida nafta. Waxay sidoo kale eegaysaa warshadaha filimada ee balaayiinta doolar ku kacaya iyo sida ay lacag u hesho markay alaabtoodu (badanaa) bilaash tahay.
Qeybta seddexaad waxay baareysaa waxa ka dhiga isku dhawaanshaha dhabta ah ee cilaaqaadka. Saamayn noocee ah ayey caadada galmada ku leedahay ogolaanshaha, qasabka, filashooyinka iyo waxqabadka galmada?
Casharka gunnada waa cusbooneysiinta hadal caan ah oo TEDx la yiraahdo "The Great Porn Experiment" oo ka caawiya ardayda inay fahmaan sida sayniska u baaraan howlaha bulshada sida bilaashka ah, qulqulka filimada qaawan ee internetka iyo sida tijaabadan bulsheed ee baaxadda weyn, ee aan sharciyeysnayn u saameyneyso caafimaadka galmada. Waxay u sharraxeysaa sayniska qaab aad u fudud oo la heli karo waxayna rajo siisaa kuwa ku dhacay dabinka.
Si wada jir ah waxay u daboolaan waxyaabo badan oo muhiim ah oo ku saleysan caddaynta ugu dambeysa ee u oggolaaneysa ka doodista mawduucyadan adag ee ku yaal meel ammaan ah.
Xirmada Filimada Internetka
Xirmooyinka Pornography Internet, Daabacaadda Caalamiga ah
Xirmooyinka Pornography Internet, Nuqulka Mareykanka
Jinsiga waa mowduuc ka duwan kuwa ka muuqda aragga hore. Xidhmadaani waxay u oggolaanaysaa macallimiinta inay sahamiyaan arrimaha kala duwan ee ardayda ka badan seddex cashar meel ammaan ah oo leh fursad ku filan oo wadahadal iyo waxbarasho ah.
Daabacaadda Boqortooyada Midowday (UK), waxaan haynaa xirmo 3-qaybood ah. Qaybta koowaad waxay ardayda ku qaadataa noocyo kala duwan oo galmada ah, waxay weydiisaa halista iyo abaalmarinta, iyo sida loo leexiyo codsiyada. Qaybta labaad waxay ardayda baraysaa astaamaha gaarka ah ee maskaxdooda qaangaarnimada, sababta ay ugu leedahay rabitaanka noocaas ah dhammaan waxyaabaha galmada ku jira oo ay ku jiraan galmada, galmada iyo halista qaadashada Qaybta saddexaad waxay ka hadlaysaa waxa khatarta galmada ay u egtahay marka laga eego xagga sharciga. Sidee sharcigu u daweeyaa galmada galmada ee waddankaaga? Saameyn intee la eg ayey ku leedahay shaqooyinka mustaqbalka haddii booliska lagu wargeliyo?
Sababtoo ah kala duwanaanshaha sharciga ee dalalka kale, daabacadaha Mareykanka iyo kuwa Caalamiga ah kuma jiraan qeybta saddexaad ee sharciga. Xirmooyinkaasi waxay leeyihiin laba qaybood oo ku saabsan galmada. Si kastaba ha noqotee waxaan ku darnay cashar gunno ah oo bilaash ah oo ku saabsan filimada internetka, oo loo yaqaan "The Great Porn Experiment" oo ku saleysan hadal caan ah TEDx.
Sexting Xidhmada England
Sexting Xidhmada Wales
Sexting Bundle Iskotland
Sexting Bundle, Daabacaadda Mareykanka
Sexting Bundle, Daabacaadda Caalamiga ah